Barcelona oo indhaha ku heysa difaaca Udinese Pablo armero.
6/26/2012 11:08:00 | Comments() Barcelona--KNN--Kooxda Barcelona ayaa raadineysa difaaca buuxa ee kooxda Udinese Pablo Armero iyadoona udhaqaqday heltanka xidggaasi. Waa ahmiyada koowad laacibiinta aan siineyno inay nagu soo biiraan sidaa waxa sheegay tababaraha kooxda Barcelona Vitto Vilanova.
Sidoo kae kooxda Barca ayaa raadineysa difaacafa Valencia Jordi Alba iyagoo sheegay in ay ku dadaalayaan labadaasi laacib ee difaaca ka ciyaara mid kood ku biriyaan Barcelona. Sports Day wargeys lagu magacaabo ayaa waxa la hadlay madaxweynaha Barcelona Sandro Rosell ayaa maamulka naadiga iyo tababaraha intuba inay keenaan Armero difaaca Udinese.